accessiBe: Ka Samee Goob Kasta Oo La Heli Karo Oo La Shaaciyey Isticmaalka Sirdoonka Macmalka ah | Martech Zone
Iyadoo xeerarka gelitaanka goobta ay jireen sanado, shirkaduhu way ka gaabiyeen inay ka jawaabaan. Ma rumaysni inay tahay arrin ku saabsan dareenka ama naxariista dhinaca shirkadaha… Runtii waxaan aaminsanahay in shirkaduhu ay si fudud ugu halgamayaan inay sii wadaan.
Tusaale ahaan, Martech Zone si liidata u gelitaankeeda. Muddo ka dib, waxaan ka shaqaynayay sidii aan u wanaajin lahaa codaynta, nashqadaynta, iyo xogta badan ee loo baahan yahay… laakiin way igu adagtahay in aan la socdo oo kaliya in aan xogtayda casriyeeyo oo si joogto ah u daabaco. Ma haysto dakhli ama shaqaale aan ku sii wado wax kasta oo aan u baahanahay inaan hore u sii wado… Waxaan si fudud u samaynayaa waxa ugu fiican ee aan awoodo.
Ma rumaysni in aan halkan ka reebayo… dhab ahaantii, tiradu waa yaab markaad falanqayso shabakada iyo qaadashada heerarka gelitaanka:
Falanqeyn lagu sameeyay malaayiinta bog ee ugu sareysa webka ayaa ku qiyaasaya in boqolkiiba 1 kaliya ay buuxinayaan heerarka marin u helka ugu ballaaran ee la isticmaalo
Waa Maxay Helitaanku? Waa Maxay Jaangooyooyinku?
Tilmaamaha Helitaanka Macluumaadka Webka (WCAG) qeexaan sida looga dhigi karo waxyaabaha dijitaalka ah kuwa u fudud dadka naafada ah. Helitaanku wuxuu ku lug leeyahay naafonimo kala duwan:
Visual Naafada - waxaa ka mid ah indho la'aanta buuxda ama qayb ahaan, indha la'aanta midabka, iyo awoodda aragga lagu takooro cunsuriyada waxyaabaha ka soo horjeeda.
Naafada maqalka - waxaa ku jira dhago la'aan buuxda ama qayb ah.
Naafada jirka - waxaa ka mid ah karti u lahaanshaha la falgalka aaladda dijitaalka ah iyada oo loo marayo qalabka aan ka ahayn aaladaha is-dhexgalka isticmaalaha caadiga ah sida kiiboodhka ama jiirka
Naafada hadalka - waxaa ka mid ah karti u lahaanshaha la falgalka aaladda dijitaalka ah iyadoo loo marayo hadalka. Dadka naafada ah waxaa laga yaabaa inay leeyihiin carqaladeyn hadalka ah oo caqabad ku ah nidaamyada casriga ah ama laga yaabo inay la'yihiin awood ay ku hadlaan gabi ahaanba waxayna u baahan yihiin nooc kale oo ka mid ah is-dhexgalka isticmaaleyaasha.
Naafada garashada - xaalado ama daciifnimo ka horjoogsata geedi socodka maskaxda qofka, oo ay ku jiraan xusuusta, u fiirsashada, ama fahamka.
Naafada luqadda - oo ay ka mid yihiin caqabado xagga luqadda iyo akhris-qorista ah.
Naafada barashada - waxaa ka mid ah karti u lahaanshaha si wax ku ool ah oo loo xafido macluumaadka.
Naafada neerfaha - waxaa ka mid ah karti u lahaanshaha la falgalka websaydhka adigoon saamayn taban ku yeelanayn waxyaabaha ku jira. Tusaalooyinka waxay noqon karaan muuqaallo kicin kara suuxdin.
Maxay Ka Kooban Yihiin Warbaahinta Dijital Ah Helitaanka?
Helitaanka maahan hal qeyb, waa isku-dhafka naqshadaha isticmaalaha dhamaadka-dhamaadka iyo macluumaadka la soo bandhigay:
Nidaamyada Maareynta Mawduuca - dhufto ee loo adeegsaday horumarinta khibradaha isticmaalaha. Barmaamijyadan waxay u baahan yihiin inay qaabeeyaan xulashooyinka marin u helka.
Content - macluumaadka ku jira bogga ama arjiga websaydhka, oo ay ku jiraan qoraalka, sawirrada, iyo codadka iyo sidoo kale lambarka ama calaamadeynta qeexaysa qaab dhismeedka iyo soo bandhigidda labadaba.
Wakiilada Isticmaalayaasha - is-dhexgalka loo adeegsaday inuu la falgalo waxa ku jira. Tan waxaa ka mid ah daalacashada, codsiyada, iyo qalabka warbaahinta.
Teknolojiyada Caawinta - shaashadda akhristayaasha, teebabka beddelka ah, furayaasha, iyo softiweerka iskaanka ah ee ay dadka naafada ahi u isticmaalaan si ay ula falgalaan wakiilka isticmaalaha.
Qalabka qiimeynta - qalabka qiimeynta marin u helka websaydhka, aqoonyahannada HTML, aqoonyahannada CSS, kuwaas oo siiya jawaab celin shirkadda ku saabsan sida loo hagaajiyo marin u helka goobta iyo heerka aad u hoggaansamayso.
AccessiBe: Ku darista AI ee Helitaanka
Sirdoonka Artificial (AI) waxay cadeyneysaa inay aad iyo aad nooga caawineyso siyaabo aanan fileynin… marin u helistuna ay hada kamid tahay. marin wuxuu isku daraa laba codsi oo si wadajir ah u gaara u hoggaansamid buuxda:
An interface helitaanka dhammaan UI iyo hagaajinta la xiriirta naqshadeynta.
An AI-ku shaqeeya asalka hawsha iyo maaraynta shuruudaha aadka u adag - ku habboonaynta akhristayaasha shaashadda iyo wareejinta kumbuyuutarka.
iyada oo aan marin, habka dib-u-hagaajinta marin u helka websaydhka ayaa lagu sameeyaa gacanta. Tani waxay qaadataa toddobaadyo waxayna ku kacdaa tobanaan kun oo doolar. Laakiin waxa ugu badan ee ku saabsan dib-u-hagaajinta gacanta ayaa ah in markii la dhammeeyo, ay si tartiib tartiib ah u burburayso sababtoo ah biraawsarka, CMS, iyo dabcan, cusbooneysiinta websaydhka. Bilooyin gudahood, mashruuc cusub ayaa loo baahan yahay.
Iyadoo marin, hawshu way ka fududdahay:
Isku xirnaanta marin u helka isla markiiba waxay ka muuqataa boggaaga.
marin'AI waxay bilaabeysaa baarista iyo falanqaynta boggaaga.
Ilaa 48 saacadood, websaydhkaagu waa la heli karaa oo u hoggaansami karaa WCAG 2.1, ADA Cinwaanka III, Qaybta 508, iyo EAA / EN 301549.
24-kii saacba mar, AI wuxuu baarayaa waxyaabo cusub oo dib loo eegay si loo saxo.
Daadinta kumanaan doolar dhowr jeer sanadkii maahan wax ganacsiyada badankood awoodaan. Adoo ka dhigaya marin u helka webka mid aan dadaal lahayn, la awoodi karo, oo si joogto ah loo ilaaliyo - marin ciyaarta ayuu beddelaa.
marin sidoo kale waxay bixiyaan a Xidhmada Taageerada Dacwada kharash la'aan dheeraad ah, haddii ay dhacdo in u hoggaansanaanta websaydhkaaga la carqaladeeyo. Iyada oo ay weheliso feejignaantooda shaqsiyeed, xirmada waxaa ku jira xisaab-xir xirfadeed, warbixinno, khariidaynta marin u helidda, dukumintiyada taageeraya u hoggaansamida, hagista, iyo inbadan.
Wax dheeri ah aqriso Isu Soo Bixin Bilaash
Shaacinta: Shirkaddayda Highbridge waa AccessiBe lammaane waxaanan ka faa'iidaysanaynaa xidhiidhka raadraaca lammaanahayga xidhiidhka ee maqaalkan. Haddii aad u baahan tahay in lagaa caawiyo habaynta iyo geynta AccessiBe, waan ku caawin karnaa.
Tags: acessibeADA Cinwaanka IIIaisirdoonka macmalhelitaanka maqalkanaafada maqalkahelitaanka garashadanaafada garashadahelitaanka luqaddanaafada luqaddahelitaanka neerfahanaafonimada neerfahahelitaanka jirkanaafonimada jirkaQaybta 508helitaanka hadalkanaafada hadalkahelitaanka muuqaalkanaafonimada araggawcagWCAG 2.1helitaanka webkatilmaamaha marin u helka mareegaha
Ma Khalad Suuqgeynta Instgramka? U fiirso xaqiiqada!